Inona no hitranga? | NewsMada
Par Taratra sur 29/08/2019
Volana ho sarotra ny septambra ho avy io ho an’ny ray aman-dreny maro. Vao vita ny taom-pianarana, ny sasany aza mbola hanao fanadinana; efa manomboka sahady ny fisoratana anarana izay handaniana volabe tokoa. Misy ireo banky manome tolotra amin’ny fampindramam-bola azo vetivety, saingy haverina amin’ny fotoana lava ary tataovana zana-bola koa. Izay efa eo, mampiady saina koa ny resaka vidin-tsolika. Nisy tokoa ilay fidinana nampanantenaina na tsy araka izay noheverina aza. Araka ny resaka mandeha, mety hiverenana indray ilay vidiny tena izy, amin’ity volana septambra ity. Ny fanazavana omen’ny Sampandraharaha miadidy ny akoranafo (OMH) tsy milaza mazava na hisy izay fisondrotana izay na tsia. Tsy mbola afaka manome valin-teny mazava izahay raha ny tondro isa eo am-pelatanana, hoy ny tompon’andraikitra iray. Ny azo antoka aloha, tsy nitsahatra nitotongana ny lanjan’ny ariary raha mitaha amin’ny dolara. Ny vidin-tsolika teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena rahateo tsy nidina velively noho ny savorovoro ara-politika ao Moyen-Orient, izay toerana misy ady mahamay hidiran’ireo firenena maro.
Raha atao bango tokana, mety ho feno ny fepetra hampiakarana ny vidin-tsolika eto amintsika. Ilay hevitra naroso hoe ny fanjakana no hanafatra mivantana tsy dia hita hoe nankaiza. Sarotra ny hanantanerahana izay satria mety hiteraka olana ny fitsinjarana. Tsy toy ny vary na menaka izy ity fa misy fombafomba ara-teknika arahina. Atahorana ny firehetana raha misy ny kitoatoa.
Etsy an-kilany ny fanjakana milaza koa fa tsy hanome vola intsony ahafana manentsina ny banga fa mitaky koa amin’ireo mpandraharaha ny solika ny tamberim-bidy tokony hohefainy. Mba hanatsarana ny fanamboaran-dalana ohatra. Satria ny fitaterana solika amin’ny fiarabe manimba ny lalam-pirenena faharoa raha tsy hiresaka afa-tsy izay. Efa eo ny fampidirana mpianatra tsy maintsy hatrehina. Ny vidin-tsolika ahina hiakatra izay tsy maintsy hiantraika amin’ny vidin’entana hafa. Ho henjana ny miandry ny Malagasy. Ny fandalovan’ny papa François ve mety hitondra hery ho an’ny tsirairay? Minoa fotsiny ihany.